​Howlgallo ka socda magaalada Garowe [Sawirro] - Worldnews.com
Howlgalkan oo isugu jira laba dhinaca ayaa lagusoo beegay xilli dhawaan la filayo in Puntland uu yimaado Madaxweynaha dowladda
GAROWE, Puntland- Waxaa wali kasocda magaalada Garowe howlgal lagu xaqiijinayo amniga caasumadda kadib markii ay muddooyinkii dambe u muuqatay mid faraha kasii baxday,...
Gareowe Online 2016-08-18
GAROWE, Puntland- Shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen mas’uuliyiinta wasaaradda amniga, gobolka degmada Garowe iyo taliyaasha laamaha nabadgalyada Puntland ayaa laga soo...
Shirkad Turkish ah oo Garoowe Jidad ka samaynaysa
GAROOWE, Puntland- Qorshe Tabarucaad iyo iskaa wax u qabso ah ayaa lagu dhisi doonaa Lix waddo oo dhawaan laga hirgalin doono magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland....
​Ha'yadda PASAWEYN oo daah-furtay mashruuca biyo galinta Eyl
GAROWE, Puntland- Ha'yadda PASAWEYNayaa maanta magaalada Garowe caasumadda Puntland ku daah furtay mashruuc katirsan Barnaamijka JPLG-ga oo biyo galin loogu samaynayo...
Gareowe Online 2017-01-19
Maxaabiis Xabsiga Garowe laga sii daayay oo lasoo celiyay iyo Muxiyadiin oo la eedeeyay [Daawo]
GAROWE, Puntland- Taliska Saldhiga dhexe ee magaalada Garowe ayaa maanta mar kale xabsiga dhigay dhalinyaro dhawaan Jeelka laga sii dayay kadib markii la waayay cadaymo...
Gareowe Online 2017-08-31
GAROWE, Puntland- Taliska Saldhiga dhexe ee magaalada Garowe ayaa maanta mar kale xabsiga dhigay dhalinyaro dhawaan Jeelka laga sii dayay kadib markii la waayay cadaymo muujinaya kiiska lagu haysto, taasoo markii dambe dhalisay in shaqada laga joojiyo Taliyihii ciidamada Booliiska Puntland. Dadka la sii dayay oo markii hore tiradoodu 12 qof oo qaybtood ahaayeen Arday wax ka...
​Daroogo lagu gubay magaalada Galkacyo
GALKACYO, Puntland- Ciidamada ammaanka ayaa maanta magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ku gubay khamri iyo xashiis lagusoo qabtay howlgal todobaadkii hore laga sameeyay xarunta gobolka Mudug. Ciidamada la dagaallanka mukhaadaraadka ayaa goob fagaaro ah ku gubay maandooriyahan oo la rabay in si qarsoodi ah loo soo galiyay magaalada Galkacyo. Taliyaha la dagaallanka...
DANGOROYO, Puntland- Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maanta dhigax-dhigay waddo Laami ah oo isku xiri doonta magaalooyinka Eyl iyo Garoowe ee gobolka Nugal. Farmaajo oo ay welinayaan wufuud katirsan Dowladda Soomaaliya iyo Puntland, ayaa dhagax dhigan sameeyay isagoo safar u sii ahaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar...
Madaxweynaha HirShabeelle oo gobolka Hiiraan ka sameeyay Maxkamad Islaami ah
BALADWEYNE, Hiiraan- Madaxweynaha maamulka HirShabeelle, Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa soo saaray wareegtooyin labo ah oo maxkamado Islaami ah loogu samayay gobolka Hiiraan iyo degmada Baladweyne ee caasumadda gobolkaas. Qoraal maanta kasoo baxay xafiiska Madaxweyne Cosoble, ayaa lagu sheegay in xalka gobolka iyo degmada loo arkay in la sameeyo maxkamad Islaami ah si loo helo...
GAROWE, Puntland- Wafdi uu hogaminayo madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa maanta tagay degmada Dangoroyo ee gobolka Nugal. Safarka madaxweynaha oo ay ku weheliyaan Xildhibaano, xubno katirsan golaha wasiirrada iyo maamulka gobolka Nugal, ayaa salka ku haya dhismaha gole deegaan oo degmadaas yeelato. Socdaalka Gaas, ayaa yimid kadib markii wasaaradda Arrimaha...